ब्लग - कान्तिपुर समाचार
'एक जना नेपालीलाई अजमान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, कहाँ राखेको छ थाहा छैन । दूतावासमार्फत सहयोग गरिदिनु पर्‍यो सर !', सुशीलजीले फोनमार्फत सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभयो । मैले घटनाबारे तुरुन्त नेपाली दूतावासमा जानकारी गराएँ । दूतावासमार्फत उनको बारेमा खोजी गरियो । अहिले पनि रिहाईको लागि आवश्यक सहयोग र पहल जारी छ ।
मानिसले भने र भनिरहेका छन्, ‘भाग्यमानी मान्छे, चिट्ठा पर्‍यो, आदि ।' म लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको मान्छे, म त्यस्तो कडा नास्तिक र भौतिकवादी पनि होइन । मठमन्दिर, पूजापाठ, धर्म संस्कृति, रितिरिवाज लगायतका परिवेशमा जेलिलिएर जन्मे, हुर्के, बढेको मान्छे । पोहोर साल यसै ताकाको कुरो, माघ महिनातिर एक महिनाभर श्री स्वस्थानी कथा वाचन र श्रवण गर्ने समय र प्रचलन । जहाँ नवराजलाई हात्तीले माला लगाई दिएको भरमा राजा भएको महिमा भएको समय र पृष्ठभूमिमा भाग्यमानीको रूपमा चर्चा हुँदा समय र मनोविज्ञानलाई सबैजसो मानिसहरूबाट मलाई यसरी नै लिइयो । म अपाङ्गता भएको व्यक्ति राष्ट्रियसभाको सांसद हुँदाको चर्चा परिचर्चा ।
म एक अदक्ष विदेशी श्रमिकका रूपमा दक्षिण कोरिया पुगेको सुरु-सुरुमा यहाँका नागरिकहरूले तेरो देशमा टिभी छ? कम्प्युटर छ? भात पाउँछ? गाडी छ? रेल छ? जस्ता हेपाहा प्रवृत्तिका प्रश्नहरू गर्थे ।